Ukutya kwengxowa yokutya eChina, i-Cannabis Bag, ingxowa yephepha, ibhegi enokuboliswa ziintsholongwane-Ukupakisha kukaBeyin
Ukupakisha kuka-Beyin ngumenzi weengxowa zokupakisha ezinobungcali, sijolise ekuyileni nasekuveliseni iibhegi zekofu, iingxowa ze-cannabis, iingxowa zeti, iingxowa ze-snack, iibhegi zamandongomane, iingxowa zeziqhamo ezomileyo, iingxowa zokutya, ukutya kwezilwanyana zasekhaya, iingxowa zomgubo, iingxowa zesosi, iingxowa ezincamathelayo, phindisela iingxowa, iifriji izingxobo, iingxowa zentsontelo, iingxowa zephepha, ifilimu esongwayo, njl, iingxowa ezinokuboliswa ziintsholongwane nazo ziyafumaneka.
Ubungakanani beebhegi bohluka ukusuka kwi-0.5g ukuya kwi-1lb. Baninzi abakulungeleyo ukuhambisa iimodeli, ezinjengekuki, i-runtz, inkwenkwe esehlathini, i-skittle, ikhekhe lomtshato, intambo ye-newds, iphupha eliluhlaza, njl.njl. Sinokwenza iintlobo ezininzi zebhegi yokuxhathisa abantwana, njengepiniki N ibhegi yesilayidi, ibhegi eneziphu ephindwe kabini, isikhwama se-slider, njl njl.
Isingxobo sekhofi sithandwa kakhulu kwihlabathi liphela, ngesiqhelo sinokuba yibhegi ethe tyaba, ibhegi yokuma, ibhegi yegusset esecaleni kunye nengxowa ezantsi ethe tyaba. Ngezinto eziphathekayo, phantse bonke abathengi bakhetha i-foil efakwe ngaphakathi, kodwa abanye bathanda ukugqiba kwe-matt ngelixa abanye bethanda. Kwivelufa, ukuba imveliso yakho ziimbotyi zekofu, emva koko uyakufuna indlela enye ivelufa yokukhupha umoya, ngelixa imveliso yakho iyimpuphu yekofu, ngegama akukho mfuneko yevalvu.
Ibhegi yespout isetyenziswa kakhulu kwiziselo, iisosi, kunye nokutya kwabantwana, njl., Kukho ubungakanani obuninzi beengxowa zespout, ezinje nge-50ml, 100ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml, njl njl. ispout esiqhelekileyo okanye ispout sokumelana nomntwana sokutya kosana, akukho zipper, uziphu oqhelekileyo okanye uziphu ophindwe kabini.
Iphepha le-Kazuo Beyin kunye nePlastiki yokuPakisha Co., Ltd. eyabekwa ngaphambili yi-Xiongxian Juren Paper kunye nePlastiki yokuPakisha Co., Ltd, yasekwa ngo-1998 ekuqaleni kweminyaka engaphezulu kwama-20, ngoku ukupakisha kuka-Beyin kuye kwaveliswa kwaba yimveliso lweshishini elikhethekileyo ekuphuhliseni nasekuveliseni iingxowa zeplastiki eziguqukayo. Amandla emveliso anokufikelela kwi-60million RMB ngonyaka ngamnye; Iindibano zocweyo ezisi-7 zakhiwe ngeeseti ezingama-50 zezixhobo eziphambili ezikhokelwayo ezifakiweyo.Kukho umsebenzi ongaphezu kwe-100 wabasebenzi eBeyin ukupakisha, abangama-50 kubo ngamagcisa aqeqeshiweyo aqeqeshiweyo anesiqinisekiso sokuprinta, amagcisa aphezulu ali-10 sele ethathe ishishini lokupakisha kangangeminyaka eli-10. Abasebenzi abazizityebi abanamava banelisa ngokupheleleyo zonke iimfuno zabathengi.